Archive du 10-juin-2021
Politika hafahafa Atosika hiady amin-dRavalomanana ve ny zandary ?
Na nisy aza ny fanambarana hentitra nataon’ny Filoha teo aloha Marc Ravalomanana ny alatsinainy teo niantso
Tsy lany lainga
Naman’ny efa miaina ao anaty vanim-potoana hafa kokoa ivelan’ny fiatrehana ny valanaretina coronavirus isika taorian’ny 30 mey
Fihaonana anatina fety Efa miomana sahady ny Ministeran’ny Fahasalamana
Mbola tsy tena foana tanteraka ny valan’aretina Covid 19 eto amintsika.
Eric Rabesandratana “Mahafapo ny fiarahana hatreto”
Ilaina ny mahafantatra ny momba ireo mpilalao, hoy ny mpanazatra ny ekipam-pirenena Malagasin’ny baolina kitra,
« Opérateurs téléphoniques » Mahatofoka vahoaka tanteraka
Andrasan’ny maro ny ho valin’ny fanadihadiana parlemantera momba ireo « opérateurs téléphoniques »
Coronavirus 3 maty, 28 ny tranga vaovao
Miisa 3 ireo olona lavon’ny valanaretina coronavirus ny talata 8 jona teo, izay teto Analamanga avokoa.
Filankevitry ny minisitra Nankatoavina ny fametrahana ny faritra faha 23
Araka ny tolo-kevitry ny Ministeran'ny Ati-Tany ny Fitsinjaram-pahefana, nankatoavina nandritra ny Filankevitry ny minisitra omaly 09 jona
Ibrahim Amada “Nisy kalitao ny vita tao anatin’ny 2 andro”
Tao anatin’izay 2 andro izay dia nahitana vitrika na “intensite”, hoy ny kapiteny lefitry ny Barea, Ibrahim Amada,
Ady tany etsy Antanandrano Mitohy mampiditra ny fitaovany ilay orinasa
Ny taona 2005 no tena nanomboka ny ady mikasika ity tanindrazanay eto Antanandrano,
Fitaterana anabakabaka sy fizahantany Mandray anjara amin’ny “Aviadev Afrika 2021” i Madagasikara
Nisokatra tamin’ny fomba ofisialy omaly alarobia 09 jona, ary haharitra telo andro, ny hetsika iraisam-pirenena momba
Faktioran’ny JIRAMA Velon-taraina ny ankamaroan’ny mpanjifa
Tena nampitaraina fatratra ny mpanjifa ny faktiora navoakan’ny JIRAMA tamin’ny fandaniana jiro sy rano tamin’ny volana mey lasa teo.
Fanendahana eny Behoririka Tratra teo am-pisintonana findain’olona ilay tovolahy
Tovolahy iray vao 18 taona monja no saron’ny Polisy avy ao amin’ny kaomisarian’ny Boriboritany fahatelo
Gerard Ramamimampionona “Mila manangana politika ho antsika isika”
Anaty volana jona isika ankehitriny, hoy ny filoha lefitry ny filankevitry ny fampihavanana Malagasy.
Taxi-brousse Misy tsy manana fahazoan-dalana kanefa miasa ihany
Betsaka ireo fiara tsy manana fahazoan-dalana lasa mitrandraka ny lalam-pirenena toy ny RN4 sy ny RN 2